Igumbi elinye kumbindi we-Umeå - I-Airbnb
Igumbi elinye kumbindi we-Umeå
Umeå, Västerbotten County, Sweden
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguSusanne
Igumbi lam libekwe kwisitalato esizolileyo ngasemlanjeni. Inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela kunye negumbi elikhulu lokuhlamba impahla phantsi. Ndine-wi-fi yasimahla kunye nebhayisekile endinokuyisebenzisa. Ikufuphi kumbindi wesixeko kwaye ithatha i-15 min. ngebhayisekile ukuya eUni. Igadi ukuhlala kuyo.
Ligumbi elihle elinebhedi entsha, ndilungisa ibhedi ngelinen. Uya kuba neetawuli ezimbini. Ungasebenza kwigumbi kuba yindawo ezolileyo kakhulu. Kufuphi nawo onke amaziko edolophu kunye nendalo ngasemlanjeni. Kulula ukuya eUni. kunye neebhasi.
4.91 out of 5 stars from 308 reviews
4.91 · Izimvo eziyi-308
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi308
I-Teg yindawo ezolileyo nenoxolo kumbindi we-Umeå. Ungawubona umlambo kwifestile yasekhitshini. Ikufuphi neziqithi ezibini ezintle ezisemlanjeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Susanne
Ndingumntu othanda abantu kwaye ndifumana uvuyo lokuthetha neendwendwe zam. (Kodwa kuphela ukuba baxutywe ...)
Ndisebenza ekhaya kwaye ubukhulu becala ndikwistudiyo sam, ngoko kulula ukuba ndincede xa kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Umeå